Baarlamaanka Federaalka oo diidey codsi uga yimid Raysalwasaare Sharmaake - Wargane News
Home Somali News Baarlamaanka Federaalka oo diidey codsi uga yimid Raysalwasaare Sharmaake
Baarlamaanka Federaalka oo diidey codsi uga yimid Raysalwasaare Sharmaake
Xildhibaanada Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday codsi uga yimid Raysal wasaare Cumar C/rashiid oo ahaa in dib loogu dhigo horkeenida golaha wasiirada Cusub oo lagu balamay 17ka bishan.
Xildhibaanada ayaa ku murmay warqada uga timid Raysa wasaaraha iyagoo qaarka mid xildhibaana ay diidanaa in codsiga lagu celiyo Raysalwasaaraha lagana aqbalo dib u dhigista ansixinta xukuumadiisa, Halka xildhibaano ay ka soo horjeedeen go’aankaas.
Fadhiga xildhibaanada oo qaybtii hore uu shir gudoominayey Gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad ayaa xakaymayn waayey hogaaminta fadhiga Baarlamaanka, waxaana xarunta soo gaaray gudoomiyaha Baarlamaanka Pro Jawaari oo si rasmi ah u furay dooda warqada codsiga ee Raysal wasaaraha.
Dood dheer ka dib waxaa cod loo qaaday codsiga uga yimid Raysal Wasaare Cumar C/rashiid waxaana codsiga in la aqbalo ka hor yimid 120 Xildhibaan halka ay ogolaadeen 57 Xildhibaan waxaana ka aamusay hal Muddane.
Sidaas waxaa looga hor yimid codsiga raysal wasaare Cumar C/rashiid waxaana Gudoonka Baarlamaanka uu sheegay in raysal wasaaraha la sugayo xukuumadiisa maalinta Sabtida ee taariikhd tahay 17ka January oo ah maalintii lagu balan sanaa in la ansixiyo golaha wasiirada Cusub.
Somaliland: “Waxaanu Rajaynaynaa In Aanu Dekedda Berbera Ku Soo Xidhno Koonfurta Suudaan Oo Ay Wax Uga Soo Dagaan Waxna Uga Dhoofaan” Wasiir Sacad.